Rindrambaiko fitantanana kaonty Forex, Forex Mt4 Multi Account Manager, kaonty FX marobe | FXCC
Home / sehatra / PC / Multi Account Manager
Mpivarotra matihanina manana kaonty maro sy mpitantana manana vola no mila fitaovana izay mitantana kaonty maro tsotra sy azo antoka.
Eto amin'ny FXCC dia mirehareha isika amin'ny famahana olana rehefa mipoitra. Izany no antony anoloranay mpivarotra sy mpitantana vola maro ny rindrambaiko MetaFx MAM (Multi Account Manager). Ny MAM dia manana tombony manan-danja amin'ny sehatra hafa mitovy amin'ny MetaTrader Multi Terminal ohatra.
Ny fampiharana FXCC MAM dia mifanentana amin'ny:
Mpivarotra matihanina na mpitantana vola izay mila manangona MT4 maro isan-karazany
Ny mpivarotra mila mijery ny kaonty sy tantara amin'ny kaonty maro
Mpivarotra manao varotra vondrona amin'ny anaran'ny kaonty maro
Ny vahaolana Multi Account Manager no manohana:
Famonoana tsy manara-penitra, fanaraha-maso Broker ary fanavaozam-baovao tsotra amin'ny alàlan'ny serasera plugin
Avelao hifaneraseran'ny Expert Advisor (EA) ny kaonty voatahiry amin'ny mpanjifa
Fampiharana amin'ny Client Side Software ho an'ny fanitsiana angona varotra
Kaonty tsy ara-barotra
STP amin'ny kaonty maoderina ho an'ny famonoana didy lehibe, miaraka amin'ny famindrana tsy tapaka amin'ny kaonty sub
Ny raharaham-barotra - Standard sy Mini Lot no manome tombontsoa manokana
"Famaranana ny vondrona" amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso Main
Fanakatonana ampaham-potoana amin'ny baiko nataon'ny famonoana ny kaonty Master
Full SL, TP & Fomba fanaraha-maso mialoha
Ny kaonty Sub rehetra tsirairay dia manana ny vokatra ho an'ny tatitra fitaratra
Ny varavarankelin'ny famantaranandro ao amin'ny MAM
Fanaraha-maso ny fitantanana mivantana ao amin'ny MAM, anisan'izany ny P & L
Manolotra safidy mavesa-danja be amin'ny MAM ny MAM:
Lot Allocation: Voatendry isaky ny kaonty tsirairay ny volavola
Salan'isa isan-jato: Ny isan-jaton'ny habetsahan'ny varotra ao amin'ny kaonty maoderina dia asiana amin'ny kaonty tsirairay.
Hatraiza ny halatra: Auto Feature izay manitsy automatique ny isan-jaton'ny fandoavam-bola amin'ny kaonty rehetra amin'ny kaonty maoderina, ary amin'ny alalan'ny fampielezana ny habetsaky ny kaonty maoderina amin'ny kaonty mavitrika rehetra.
Fandraisan'anjaran'ny Equity: Auto Feature izay manitsy ny isan-jaton'ny fitoviana eo amin'ny kaonty rehetra ho an'ny kaontin'ny tompony isan-karazany, ary amin'ny alalan'ny fampielezana ny habetsaky ny kaonty maoderina amin'ny kaonty rehetra mavesa-danja.
Fandrosoana isan-jato: Amin'io endri-javatra io, ny tompon'andraikitra amin'ny kaonty dia manondro ny isan-jaton'ny tahiry azo ampiasaina amin'ny varotra, izay ampiasaina amin'ny X% amin'ny tahiry ho an'ny fidirana tsirairay.
Fitantanam-bola isaky ny fametrahana manam-petra
Post Trade Pricing
Tahiry vaovao vaovao
Ny iray amin'ireo karazana malaza indrindra amin'ny MT4 dia ny fahafahana mivarotra mivantana avy amin'ny charts. Izany dia mitondra ny rindrambaiko MAM, noho izany dia afaka mihazakazaka kaonty maromaro ianao miaraka amin'ny fonctiona fonosana ara-tantara.
Ny FXCC Multi Account Manager dia eo am-pifaneraserana teknolojia ho an'ny fandefasana kaonty maro. Ny lisitry ny lisitra dia mahatalanjona ary hampilamina ny fitantanana ny kaonty amin'ny sehatra forex.
Aza hadino fa: Ny rindrambaiko MAM dia fampiharana an'ny antoko fahatelo. Izay olana ara-teknika na fanohanana dia tokony hapetraka any amin'ny MetaFX.